ग्यास्ट्रिक बढेर हैरान हुनुहुन्छ ? घरमै बसेर यसरी पाउनुहोस बर्षौ देखीको ग्यास्ट्रिक बाट छुटकारा ! – List Khabar
Home / स्वास्थ्य / ग्यास्ट्रिक बढेर हैरान हुनुहुन्छ ? घरमै बसेर यसरी पाउनुहोस बर्षौ देखीको ग्यास्ट्रिक बाट छुटकारा !
ग्यास्ट्रिक बढेर हैरान हुनुहुन्छ ? घरमै बसेर यसरी पाउनुहोस बर्षौ देखीको ग्यास्ट्रिक बाट छुटकारा !
काठमाडौँ । पेट दुख्ने, पोल्ने, अम्लपित्त बढ्ने आदि लक्षणयुक्त समस्यालाई नै ग्यास्ट्रिक भन्ने गरिन्छ । ग्यास्ट्रिक भएकाहरुलाई वाकवाकी लाग्ने, वान्ता हुने, ढ्याउ ढ्याउ आउनु, वान्तामा रगत देखिने, कालो दिसा आउने, खाना नपच्ने, तौल कम हुने ,छाती र पेटको बीचको खाल्टो वरिपरि दुख्ने, पेट पोल्नु, भोक हराउनु, अम्लपित बढ्नु, मुख बिग्रिनु, पेट भारी हुनु, आपन वायु बढ्ने आदि लक्षण देखा पर्नु नै यसको लक्षण हो । यसबाट बच्ने घरेलु उपायहरू धेरै छन् ती मध्ये केही यहाँ भनिएको छ:
१.बेसारको पात बेसारको पातलाई सबैभन्दा राम्रो ग्यास्ट्रिकको औषधिको रुपमा मानिन्छ । दिनको एक ग्लास दुधमा चप गरेको बेसारको पात मिसाउनु र दिनहुँ पिउनुहोस् । यसो गर्दा ग्यास्ट्रिकको समस्या कम हुँदै जानेछ ।
२. अम्बाको पात एउटा अम्बाको पात लिनुहोस् र त्यसलाई पानीमा उमाल्नुहोस् । यसलाई दिनहँ पिउँदा ग्यास्ट्रिकको समस्या कम हुँदै जानेछ ।
५.बेकिङ सोडा बेकिङ सोडामा धेरै मात्रामा ब्लतबअष्म भएको कारण यसले ग्यास्ट्रिकको समस्या हटाउन मदत गर्दछ । एक ग्लासमा आधा चम्चा बेकिङ सोडा राखेर मिसाउनुस् र दिनहुँ यसको प्रयोग गर्ने गर्नुहोस् ।
६.दालचिनी तातेको दूधमा आधा चम्चा दालचिनी को धूलो, मह अलिकति राखेर मिसाउने र यसको सेवन राती सुत्नु अगाडि गर्नु । यसले ग्यास्ट्रिकको समस्या कम गर्न मदत गर्दछ ।
९.लसुन २.३ वटा लसुनलाई आगोमा पोल्नुस् त्यसपछि त्यसको बोक्रा निकालेर खानुहोस् । ताजा लसुनलाई पिसनु, जिराको धूलो, जिराको गेडालाई पानीमा राखी उमाल्नु र यसको सेवन गर्नु ।
११.पुदिना एक ग्लास पानीमा ताजा पुदिना राखेर उमाल्ने र सेलाएपछि त्यसमा मह हालेर दिनको दुई र तीन पटक खानुहोस् । यसले ग्यास्ट्रिक समस्यालाई हटाउन मदत गर्दछ ।
Previous आफ्नै कलेजो का’टेर श्रीमानलाई जीवन दान दिने’ यी महान नारीलाई तपाईंहरु के भन्नुहुन्छ ?
Next लीवर खराब हुनुअघि शरीरले दिन्छ यी संकेत, यस्ता लक्षणलाई नगर्नुहोस् वेवास्ता